पढेकै विद्यालयमा जिम्मेवारी - Pradesh Today पढेकै विद्यालयमा जिम्मेवारी - Pradesh Today
पुष ०२, २०७५ जीतसागर जी.एम.
बोलीले मानिसको व्यवहार झल्काउँछ भने काम गराईले क्षमता झल्काउँछ र मेहनतले सफलतामा पुु¥याउँछ । के काम गर्ने, कसरी, किन र कहाँ गर्ने ? सबैलाई थाहा छ तर पनि धेरै मानिस असफल हुन्छन् । किनकी तिनिहरु मेहनत कम गर्छन् । मेहनत र परिश्रमलाई शिरोधार्य गर्ने मानिस एकदिन अवश्य सफल गन्तव्यमा पुुग्छन् । जसको गतिलो उदाहरण बनेका छन् भूुपाल शाहुु, । कर्णाली प्रदेशको सल्यानको कपुुरकोट गाउँपालिका–५ रिममा जन्मिएका भूपाल आफैले पढेको विद्यालयलाई हाक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सानै उमेरमा निकै लगनशील युवा जो कक्षामा कहिल्यै तेस्रो, चौथो स्थान हासिल गरेनन् । विस २०४७ सालमा आफ्नो पढाइलाई अघि बढाएका जीवन ज्योति मावि रिमका प्रधानाध्यापक भूपालले लगातार कक्षा ७ सम्म कक्षा प्रथम भइरहे । उनले भने– सानोमा निकै पढाइप्रति निकै मेहनत पनि थियो, जसका कारण कक्षामा म पहिलो स्थान हासिल गर्थेँ, कक्षा ८ देखि अहिलेसम्म पनि दोस्रो स्थानभन्दा पछि कहिल्यै गएन् उनले भने । ३४औँ बसन्तमा प्रवेश गरिसकेका उनले अहिले पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनले भने– एमएसम्मको अध्ययन पछि अब एलएलबिको अध्ययन थालेको छुु, पढ्ने र पढाउने पक्रिया चलिरहेको छ । करिब एक वर्ष अघि कपुरकोट गाउँपालिका–५ रिममा रहेको जीवन ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा प्रमुुखको जिम्मेवारी पाएका उनले लामो मेहनत र प्रयासपछि मात्रै आफू यो स्थानसम्म आएको बताए ।
पिता कर्णबहादुर शाहु र माता कर्नी शाहुुका साइला सुुपुत्र भूपालले आफैले पढेको विद्यालय हाक्ने जिम्मेवारी पाएपछि अब विद्यालयमा शिक्षाको गुुणस्तरतासँगै भौतिक संरचनालाई पनि सुुधारतर्फ लागेको बताए । विद्यालयमा आएको केही समयमा पछि प्रमुखको जिम्मेवारी पाए, अब विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षणको केन्द्रको रुपमा विद्यालयलाई विकास गर्नेछुु उनले भने । तपाई आफैले माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेको विद्यालयमा आफैलाई प्रमुुखको जिम्मेवारी पाउँछु भन्ने लागेको थियो र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने– मैले ठ्याक्कै यही विद्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछुु भन्ने त लागेको थिएन् । तर कुनै पनि विद्यालयमा प्रमुुखको जिम्मेवारी पाउँछुु भन्ने चाहिँ थियो ।
विद्यालयलाई हाक्ने व्यक्तिदेखि लिएर त्यससँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विचार, आचारण, सोच, सपना र कार्यशैलीले संस्थालाई राम्रो–नराम्रो, सवल–दुर्वल, सफल–असफल आदि बनाउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ, मलाई लाग्दछ सबैको साथ र सहयोग अवश्य पाउने छुु र पाई पनि राखेको छुु उनले थपे ।
कुुनै पनि समयमा विद्यालय हाक्ने जिम्मेवारी पाउँछुु भन्ने थियो । काम गर्दै जाँदा आफैले पढेको विद्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएको उनले बताए । उनले भने– हुन त सबै विद्यालय कलेज सर्वगुण सम्पन्न हुन सक्दैनन् । तर विद्यार्थीको सर्वोपरी विकासका लागि आवश्यक आधारभूत सुविधाहरु बनाउनतर्फ म लागिरहेको छुु । विद्यालयलाई हाक्ने व्यक्तिदेखि लिएर त्यससँग प्रत्यक्षरुपमा संलग्न व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत विचार, आचारण, सोच, सपना र कार्यशैलीले संस्थालाई राम्रो–नराम्रो, सवल–दुर्वल, सफल–असफल आदि बनाउन मूख्य भूमिका निर्वाह गर्दछ, मलाई लाग्दछ सबैको साथ र सहयोग अवश्य पाउने छुु र पाई पनि राखेको छुु उनले थपे । विद्यालयमा आउनुभन्दा अघिको विगतलाई तपाई कसरी सम्झनुु हुुन्छ भन्दा उनको जवाफ छ– मैले जब यसै विद्यालयमा २०५८ सालमा एसएलसी दिएको थिएँ । एसएलसीमा विद्यालयबाट करिब ३९ जना विद्यार्थी सहभागी भएपनि आफूसहित तीनजना मात्रै एसएलसीमा उत्तीर्ण भएको उनले बताए । उनी भन्छन्– द्वन्द्वकालिन अवस्थामा मैले एसएलसी परीक्षा दिएको थिएँ, त्यो समयमा हामीले पढ्ने भन्दा पनि ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने हुुन्थ्यो र पनि पास भईयो । कक्षा १० अध्ययन पछि एउटा निजी विद्यालयबाट अध्यापन पेशालाई निरन्तरता दिएको उनले बताए । उनले सल्यानका विभिन्न स्थानमा रहेका विद्यालयमा अध्यापन गराएपछि अहिले जीवन ज्योति माविको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् । विभिन्न विद्यालय हुँदै उनी अहिले आफैले पढेको जीवन ज्योती माविमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाएका हुन् । कक्षा १२ सम्म अध्यापन हुुने जीवन ज्योती माविमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनि अब विद्यालयलाई सल्यानकै नमुुना बनाउने अभियानमा लागेका छन् । विद्यालयलाई राम्रो बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग र साथ दिएको उनले बताए । मैले विद्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी भएपछि विद्यालयमा शिक्षाको गुुणस्तर पनि थपिएको छ र विद्यालयमा हुने गतिविधि निगरानीका लागि सिसी क्यामरासमेत जडान गरिएको छ भने हाजिरी गर्नका लागि पनि ईलेक्ट्रोनिक हाजिरीको समेत व्यवस्था भएको छ उनले भने । सामुुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका उनले सानै उमेरमा विद्यालय प्रमुुखको जिम्मेवारी पाएका हुुन् ।
प्रधानाध्यापक शाहुले विद्यालयमा अहिले करिब ६ सय विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । उनले विद्यालयको भौतिक विकासको लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको भन्दै विद्यालयमा छिट्टै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको बताए । विद्यालयको विकासका लागि सबैको सकारात्मक सोच अनिवार्य हुुनुुपर्ने बताउँदै उनले भने– स्थानीय सरकारले पनि शिक्षाको विकासका लागि लागेको छ म अझै सहयोगको अपेक्षामा पनि छुु । आफैले पढेको विद्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका उनले आफ्नो सफलतामा सबैको साथ र सहयोग रहेको बताए ।
घोराही खानेपानीमा प्रजातान्त्रिक प्यानल